Chicharitto Oo Jeclaaday Gabadh Lala Xidhiidhinayay Cristiano Ronaldo
HomeWararka MaantaChicharitto Oo Jeclaaday Gabadh Lala Xidhiidhinayay Cristiano Ronaldo
Gabadha quruxda baddan ee lala xidhiidhinayay Cristiano Ronaldo ka dib markii ay kala boodeen gacalisadiisii hore Irina Shayk ayaa hada sheeko wadaag la noqotay Weerar yahanka hore ee Manchester United Javier Hernandez oo hada ku sugan Real Madrid.
Hernandez oo loo yaqaan shimbirta yar, ayaa la sawirray isaga oo dhabanka ka dhunkanaya Lucia Villolon iyaga oo ku wada sugan garoonka diyaaraddaha ee Madrid xilli ay ka soo laabatay dalka Australia. Sawirradan la yaabka lahaa ayaa lagu daabacay bogga hore ee joornaalka Hola, dhacdadan waxa ay soo muuqatay wax ka yar bil markii ay beenisay wararkii la xidhiidhinayey inay la sheekaysato Cristiano.
Waxaa si aan kala joogsi lahayn u soo if-baxayey xan tiro baddan oo sheegaysay in inantan ay ku soo dhacday shabaqa Ronaldo iyada oo kala qeyb-gashay xafladii Ballon d’Or-ka oo uu CR7 soo qaaday sawirrana ay wada galeen. Villalon oo 26-sanno jir ah, ayaa ka shaqayn jirtay Telefishinka Real Madrid wakhtigaas balse waxa ay ku bedalatay shaqo ay ka heshay xidhiidhka tartamada baabuurta ee F1. Waxa ay qishtay inay qof la socoto markii ay beenisay arrinta Ronaldo bilowgii bishan, waxa ayna ku adkaysatay in xidhiidhkoodu uu ahaa caadiyan mid xirfadeed inta aanay ku darin “Hadalaas way i soo jiiteen waana ku faraxsanahay”. Ciyaar yahanaka ay Cristiano kooxda ka wada tirsan yihiin ee reer Mexico kaas oo la filayo inuu ka tago Real Madrid marka uu xilli ciyaareedkani dhamaado ayaa gurigeeda u kaxeeyey ka dib markii uu ka soo qaaday garoonka diyaaradaha. Sawirradii la qaaday oo muujinayey iyaga oo gamcaha is haysta ayaa ah wax ka weyn saaxiibtinimo, waxaase la aaminsanaa in Chicharito uu weli la noolaa gacalisadiisii hore ee saxafiyadda ahayd ee Lety Saharan.
Michy Batshuayi Oo Chelsea U Qaaday Premier League